I-Villa Castelletto Olive Garden enechibi elishisayo
Kypseli, Zakynthos, i-Greece
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Vasilis
I-Villa Castelletto, esendaweni ebukekayo yaseKypseli, iyi-villa kanokusho elungiswe ngokuphelele. Eduze nemvelo, itholakala endaweni ethule ye-Zakynthos, kude nezikhungo ezinkulu zezokuvakasha kodwa imizuzu embalwa ukusuka emabhishi amahle noma idolobha.
Jabulela indawo yokuphumula ehlanganisa ichibi lokubhukuda eliyingqayizivele elinezimpophoma ezingu-2, 6 per.Jacuzzi, Sauna, kanye nendawo ye-BBQ. Ngisho nomgodi womlilo ongaphandle!
Sinikeza isevisi ye-24/hr yokugcinwa kwendlu kanye nokulungisa.
Indawo ekahle yokuphumula futhi ukhohlwe izinkathazo zakho.
KUBALULEKILE: Sicela uqaphele ukuthi i-Villa AYInazo izikhala okwabelwana ngazo! Yonke i-villa nezinsiza (idamu lokubhukuda, i-Sauna, i-Jacuzzi, i-BBQ) zenzelwe wena kuphela AKUKHO UKWABELANA.
I-Villa Castelletto inamagumbi okulala angu-3 abanzi anemibhede elingana neNdlovukazi ephelele kanye namagumbi okugezela angu-2. Igumbi lakhona lokuphumula linamasofa angu-2 nosofa kanye ne-HD TV. Ikhishi lakhona lihlome ngokuphelele futhi linomshini wokuwasha izitsha nezingubo.
4.94(33 okushiwo abanye)
I-Kypseli, ebizwa nangokuthi i-Beloussi, iyidolobhana elinokuthula lamaGreki elidala kusukela ngezikhathi zaseVenetian. Idolobhana elidala, izakhiwo zalo eziyinhloko, kuhlanganise nesonto lalo, lineminyaka engaphezu kuka-500 ubudala.
Izungezwe amahlathi ezihlahla zomnqumo, amawolintshi, izihlahla zikalamula nokunye, iKypseli iyindawo yezolimo.
I-Zakynthos ngokwayo ibhekwa njengenye yamagugu aseGrisi. Amabhishi akhona adumile emhlabeni wonke, umlando wawo kanye nesiko laseVenice elinobukhazikhazi kuyathakazelisa futhi liphatha nezimfudu zasolwandle ezidumile eziyivelakancane i-Caretta Caretta. Inezindawo eziningi ezidumile ezihlanganisa ukuphahlazeka komkhumbi, isiqhingi sofudu kanye nezivini ezidumile zaseCallinikos.
Kuzoba khona insiza yokuhlanza isikhathi esigcwele, ingadi neyokusingatha zonke izinsuku. Ukwengeza, umsingathi wakho uzotholakala kunoma yiziphi izinkonzo ezengeziwe ongazidinga, ngaphandle kokuphazamisa imisebenzi yakho yansuku zonke.
Inombolo yepholisi: 00000337792